Bangiga Orange, oo ah fikrad cusub oo ah 100% bangiga guurguura, ayaa yimid Spain | Androidsis
Bangiga Orange ayaa yimid Spain
Waxaan ka qayb galaynaa a Digniinta ganacsiga maaliyadeed oo aan horay loo arag. Wararkii ugu dambeeyay ee Google ay si buuxda u bilaabayso iyada oo fikradda ah in la abuuro bangi u gaar ah maanta waxaan ogaanay taas Bangiga Orange ayaa yimid Spain. Nooca bangiga ee shirkadda taleefanka gacanta oo ballanqaaday inuu kafilayo bixinta.
Ganacsi, bangiga, kuwaas oo dalabkooda iyo xulashooyinkoodu aysan joojin kobcinta bilihii la soo dhaafay. Wax si caadi ah uga faa'iideysta adeegsadaha ka faa'iideysan kara wax soo saar iyo adeeg tartan dartiis aan lahayn ikhtiyaar aan ka ahayn inuu horumar sameeyo.
1 Bangiga Orange wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo bangigaaga cusub
2 Shirkadda taleefankaaga ayaa sidoo kale maamusha lacagtaada
Bangiga Orange wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo bangigaaga cusub
Illaa iyo hadda waxay noola muuqan doontaa wax lala yaabo in shirkadda taleefankeennu ay iyaduna tahay tan maamusha keydkeena. Laakiin tan durba waa xaqiiqo taas oo aan dhawaan la qabsan doonno. Maaha wax aan micno lahayn, Bangiga Orange ayaa shaqeynayay si guul leh dalka Gallic ee loogu talagalay in ka yar laba sano. Waqtigaasna kama joogsan koritaanka.
Thanks to dalab isku dhafan alaabada maaliyadeed iyo sicirka mobilada iyo internetka uu ka gaadhay aad uga badan 300.000 koontooyinka bangiga furan. Oo waxay siisay macaamiisheeda in ka badan 120.ooo amaah shaqsiyeed. Iyadoo la adeegsanayo qaaciddo taas wuxuu bangiga u soo dhoweynayaa tiknoolajiyadda oo ka fog xafiisyada iyo safafka aan dhammaadka lahayn, waxay ku guuleysatay farqiga u dhexeeya bangiyada Faransiiska ee la isku daray.
Imaatinkiisa Spain, Bangiga Orange wuxuu u heellan yahay isla fikradda ganacsi. Shirkad bangi moobiil oo awood u leh inay soo bandhigto alaabo maaliyadeed oo xiiso leh. Taasna oo ay weheliso qiimo dhimis iyo faa'iidooyin qandaraasyada adeegga dhijitaalka ah waxay ka dhigaysaa dalabku laba jeer mid xiiso u leh macaamiishaada badan.
Shirkadda taleefankaaga ayaa sidoo kale maamusha lacagtaada
Iyadoo a bilaabida dalab bixiyay 30 euro dhimis qaansheegta adeegga mobilada. Immisa macaamil Orange ah ayaa go'aansan doona inay furaan xisaab bangi? Kala bax lacagta ATM kasta ilaa saddex jeer bishii Guddiyo malaha. Y dhigaalka bangiga oo leh faa'iido Waxyaabaha kor ku xusan waxa bangiyada kale ay awoodaan inay bixiyaan maanta waa warqadooda daboolida.
El fikradda bangiga moobaylka gebi ahaanba waxaa sii kordheysa la wareegaya dadka isticmaala. Wax ay dhammaan hay'adaha bangiyada cusub isku dayayaan maanta barnaamijyadooda iyagoo leh guul weyn ama ka yar. Laakiin waxaan aragnaa sida ING ay aasaas ugu ahayd inay ka mid noqoto shirkadaha ugu xallinta arrimaha maaliyadeed maanta. Haddii aad ka timid Orange, intee in le'eg ayey qaadan doontaa in la furo koonto Bangiga Orange?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Bangiga Orange ayaa yimid Spain
Huawei Sound X, kani waa xifaaltanka cusub ee Amazon Echo iyo Google Home